လက် (hand) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ | ABC Radio Australia
လက် (hand) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
Lesson 10 of 14ပြောင်းရန်
Hand ​ဆိုတာ ​မိမိကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က ​လက်ချောင်း ​ငါးချောင်းနဲ့ ​ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ​လက်ကို ​ရည်ညွန်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ​hand ​ကို ​ကြိယာတွေအပြင် ​တခြား ​စကားလုံးတွေနဲ့ ​တွဲသုံးတဲ့အခါမှာ ​အဓိပ္ပာယ် ​ကွဲလွဲမှုတွေ ​ရှိပါတယ်။
Hand ​ကို ​ကြိယာအနေနဲ့ ​သုံးမယ်ဆိုရင် ​hand ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​တယောက်ယောက်ကို ​တခုခု ​လှမ်းပေး ​လိုက်တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​- ​Can ​you ​please ​hand ​me ​that ​book? ​ဆိုရင်တော့ ​‘အဲဒီ ​စာအုပ် ​တချက်ကမ်းပေးလို့ ​ရမလား’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Handy ​ကတော့ ​ကြိယာ ​ဝိသေသန ​ဖြစ်ပြီး ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​‘အသုံးကျခြင်း၊ ​အသုံးဝင်ခြင်း’ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​- ​He ​knows ​how ​to ​fix ​most ​things, ​he’s ​very ​handy ​around ​the ​house. ​လို့ပြောရင် ​‘သူက ​ဘာမဆို ​ပြင်တတ်တယ် ​ဒါကြောင့် ​အိမ်မှာ ​သူက ​အရမ်းကို ​အသုံးဝင်တယ် ​(သူ့ကိုပဲ ​အားကိုးနေကြတယ်)” ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေ ​တစ်ခုရဲ့ ​ဟိုဘက် ​ဒီဘက် ​အကြောင်း ​ပြောချင်ရင်လည်း ​hand ​ကို ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
On ​the ​one ​hand ​I’d ​like ​to ​go ​out ​tonight, ​but ​on ​the ​other ​hand ​I ​am ​trying ​to ​save ​money. ​လို့ပြောရင် ​‘တဖက်မှာတော့ ​ဒီညအပြင်ထွက်ချင်တဲ့ ​စိတ်ပေါက်နေသလို ​တဖက်မှာလည်း ​ပိုက်ဆံစုချင်နေတယ်’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Give ​a ​hand ​ဆိုတာကတော့ ​‘အကူအညီ ​ပေးခြင်း ​ဒါမှမဟုတ် ​အောင်မြင်ခြင်းအတွက် ​ချီးကျူးသြဘာပေးခြင်း’
Give ​her ​a ​hand, ​what ​a ​great ​performance. ​လို့ပြောရင် ​‘သူဖျော်ဖြေသွားတာ ​ကောင်းလိုက်တာ၊ ​အားပေးကြပါဦး’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို ​လက်ထပ်ဖို့ ​တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း ​hand ​ကို ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ​- ​He ​asked ​for ​her ​hand ​in ​marriage. ​သူက ​သူမကို ​လက်ထပ်ခွင့် ​တောင်းခဲ့တယ်။
Clap ​your ​hands ​ကတော့ ​လက်ခုတ်တီးခြင်း ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
ဆက်လက်ပြီးတော့ ​hand ​ကို ​ဝိဘတ် ​ဆိုတဲ့ ​preposition ​တွေနဲ့ ​တွဲသုံးလိုက်တာနဲ့ ​အဓိပ္ပာယ် ​အမျိုးမျိုး ​ကွာခြားသွားတာကို ​လေ့လာရမှာပါ။
At ​hand ​ဆိုတာကတော့ ​‘မှီနိုင်တဲ့နေရာ၊ ​နီးတဲ့နေရာ’ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Keep ​a ​torch ​at ​hand ​in ​case ​the ​electricity ​is ​cut ​off. ​မီးပျက်သွားတဲ့အခါ ​အလွယ်တကူ ​ရှာလို့ရအောင် ​ဓာတ်မီးကို ​လက်လှမ်းမှီတဲ့ ​နေရာမှာထားပါ။
At ​hand ​ရဲ့ ​နောက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​‘လောလောလတ်လတ် ​အရာ’
Let’s ​look ​after ​the ​business ​at ​hand ​before ​we ​talk ​about ​new ​projects. ​တခြား ​စီမံကိန်းအကြောင်း ​မပြောခင် ​လက်ရှိ ​လုပ်နေတဲ့ ​စီးပွားရေးကိုပဲ ​အာရုံစိုက်ရအောင်။
In ​hand ​- ​‘တစ်ခုခုကို ​ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ​အနေအထားမှာ ​ရှိခြင်း၊ ​နိုင်နင်း ​အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း’
By ​Friday ​night ​the ​arrangements ​for ​the ​party ​will ​be ​in ​hand. ​သောကြာည ​လောက်မှာတော့ ​ပါတီပွဲအတွက် ​အစီအစဉ်တွေက ​အသင့်ဖြစ်နေလောက်မှာပါ။
By ​hand ​- ​လက်နဲ့ ​ပြုလုပ်ခြင်း
It ​is ​amazing ​to ​think ​this ​rug ​was ​made ​by ​hand. ​ဒီကော်ဇောကို ​လက်နဲ့ ​လုပ်ထားတယ် ​ဆိုတာကို ​သိရတော့ ​တော်တော်လေးကို ​အံ့အားသင့်မိတယ်။ 